Lahatsary: ​​Mamokatra ny vokatra ve ny marketing? | Martech Zone
Lahatsary: ​​Mamokatra ny vokatra ve ny marketing?
Talata, Aogositra 23, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity dia fahitana mahafinaritra sy mahatsikaiky avy amin'i Frank Dale, CEO an'ny famintinana. Fantatro tokoa ny orinasa vitsivitsy izay ny marketing dia mihoatra ny traikefan'ny mpampiasa sy ny tolotra omen'ny vokatra. Raha ny marina dia nangataka fihetsiketsehana izay tsy hanokatra ny fampiharana azy akory aho, fa tsy mandeha amin'ny toeran'ny herinaratra mamirapiratra. Tsy olana izany rehefa dokam-barotra ny vokatrao, saingy hitako fa nandrovitra ireo orinasa sasany io raha ny sary dia sary namboarina sy nanintona ilay tena vokatra.
Mametraka ny zavatra andrasana ny marketing, manamafy azy ireo ny varotra ary manangona ny komisiona, manao sonia ny mpanjifa ary avela hidina avy hatrany. Ny olana dia mihodinkodina fotsiny mankany amin'ireo ekipa fitantanana kaonty sy serivisy ho an'ny mpanjifa. Ireo ekipa ireo dia manana fihazonana amin'ny maha iray amin'ireo tondro fampisehoana mahomby… ka rehefa miala na tsy manavao ireo orinasa ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny kaonty sy ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Tompon'andraikitra amin'ny zavatra ivelan'ny fifehezany tanteraka.
Mety ve izany? Heveriko fa ny tsy fahitana an-tsary ny vokatrao no mety foana. Na izany aza, ny sasany amin'ireo orinasa manao izany dia mirona hitombo haingana. Amin'ny fitomboana haingana dia afaka mahazo ny anjaran'ny tsena izy ireo, handresy amin'ny fampiasam-bola ary hamidy indray manatratra amin'ilay sary nasehon'izy ireo. Rehefa mahazo vola am-polony na an-tapitrisany dolara ny sasany amin'ireo orinasa ireo dia sarotra amiko ny milaza fa tetika ratsy io. Zavatra tsy tiako fotsiny io. Tsy tiako ireo orinasa manao azy. Ary tsy tiako ny manolotra ireo orinasa ireo amin'ny mpanjifako.
Tags: vokatrafitantanana ny vokatravarotra vokatraRC GlowNy zaza fotsy indrindra U'Know
Inona no mahasosotra ny olona momba ny mailaka
23 Aogositra 2011 à 7:31
Hahaha, "nahoana ny mpanjifa no misafidy zava-pisotro misy jiro mirehitra?"
Aug 24, 2011 amin'ny 12: 21 AM
Vidéo mahafinaritra Doug fa tsy maintsy lazaiko fa miha-mampihomehy sy tsy misy tsirony ny horonan-tsary mifandraika rehefa mitsoraka ianao.